Kitra sy coronavirus: nanampy ny hopitaly ao Mitsinjo i Faneva Ima | NewsMada
Kitra sy coronavirus: nanampy ny hopitaly ao Mitsinjo i Faneva Ima
Par Taratra sur 28/05/2020
Tsy mbola vita akory ny ady ataon’ny Malagasy amin’ny valanaretina coronavirus. Araka izany, tsy nanadino ireo mpiray tanindrazana aminy Andriantsima Faneva Ima, kapitenin’ny Barea de Madagascar fahiny. Ny alatsinainy lasa teo, nanolotra arovava sy savony hanasana tanana ary vary ho an’ireo mpiasan’ny fahasalamana ao amin’ny hopitaly ao Mitsinjo Betanimena, ao amin’ny faritra Atsimo Andrefana ny tenany.
Nisolotena azy tamin’ny fanolorana izany i Mamy Gotso, mpanakanto avy amin’iny faritra iny. Tsiahivina fa efa nanao tolo-tanana toa izao i Faneva Ima, ny volana avrily lasa teo ka ireo mpikirakira ny fahasalamana teny amin’ny Foibe fibaikoana ny ady amin’ny “covid 19” no nisitraka izany.
Nitazona ny teny nataony, araka izany, Andriantsima Faneva Ima, izay nilaza tamin’izany fotoana izany fa tsy hijanona eo ny fanohanany fa hitohy amin’ny faritra tapany atsimon’ny Nosy ary dia izao nahazo ny anjarany izao ry zareo any amin’ny faritra Atsimo Andrefana.